War deg deg ah: Shirkii Garoowe oo lagu kala kacay oo burburey | Calanka Somalia
← Madaxweynaha GALMUDUG oo wixii sir ahaa Shirka Garoowe ka sheegey. Buuq dhalisey
Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa sheegay in faroole yahay madax waynaha Soomaaliya la yaabka aduunka. →
War deg deg ah: Shirkii Garoowe oo lagu kala kacay oo burburey
Garoowe (Moment media Group) Sida ay u sheegeen Shabakadda MMGroup illo ku sugan Xarunta Jaamacada PSU, oo uu ka socdo shirka Garoowe 2- ee looga hadlaayo arrimaha dastuurka waxa lagu kala kacay shirka ka dib markii ergada ka socotay maamulka Galmudug ay ka baxeen shirka.
Madaxweynaha Maamulka Galmudug oo ay wehliyaan taliyihii horre ciidamada Booliska iyo afhayeenka baarlamaanka Galmudug iyo ergo kale oo ka socday dhinaca maamulka Galmudug ayaa iskaga baxay shirka. ka dib markii shirka lagu soo hadal qaaday in wax loo qeyb sado qaab qabiil.
Qaar ka mid ah ergada shirka ayaa soo jeediyay in wax lagu qeybsado si qabiil ah, laakin hadalkaas waxa ka soo horjeestay madaxweyne Caalin oo sheegay haddii sidaas ay tahay in shirka laga soo qeyb galiyo dhamaan qabiilada Soomaalida sida, Hawiye, Daarood, Digil iyo Mirifle iyo Beesha Shanaad.
Markii uu murankaas socda ayaa waxa goobta iskaga baxay ergada Maamulka Galmudug kuwaas oo aaday Hotelka ay dagan yihiin.waxana sidaas ku is-taagay shirka oo lagu kala dareeray.
Madaxweynaha Puntland Cabdi Raxmaan Maxamed Faroole oo istaagay ayaa sheegay in uu shirka sii socon doono, iyadoona loo yeeri doono ergada Jaamacada Carabta laakin warkiisa waxba kama badalin istaaga shirka uu ku yimid.
Sidoo kale wararkii ugu dambeeyay waxa ay sheegayaan in ergada Galmudug uu Hoteelka ay dagan yihiin ugu tagay Guddoomiyaha baarlamaanka Shariif Xasan Sheekh Aadan kaa oo hadda ka dhaadhinaca madaxweyne Caalin iyo Ergadiisa in ay dib ugu soo laabtaan madasha shirka.
Si kastaba, Madaxweyne Caalin furitaankii shirka waxa uu shaley ka sheegay in maamulkiisa wax dhaqaale ah uusan ka gaarin deeqaha beesha caalamka ay ku daldalaan Dowladda Fadaraalka KMG ah iyo maamulada kale sida Puntland, hadalkaas waxa uu muujinayaa sida uu suluugsan yahay Madaxweyne Caaalin iyo maamulkiisa qorshaha hadda socda.